DHEGEYSO: Taariikhdii Maxamed Cali Kalaay & qaybtii 4-aad (Tebintii Xaaji) – Gool FM
DHEGEYSO: Taariikhdii Maxamed Cali Kalaay & qaybtii 4-aad (Tebintii Xaaji)
Raage June 9, 2016
(Phoenix) 09 Juunyo 2016 – Dhegeystayaal kusoo dhowaada qaybtii 4-aad uguna dambaysay sheekooyin ku saabsanaa taariikh nololeedkii feeryahankii, gayfanihii, daacigii, shakhsiyaddii iyo xirfadlihii waynee ee Muxamed Cali Kalaay.
Sida aanu sii sheegnayba waxaa Cali laga helay cudurka lalleemada ee Parkinson’s Desease 3 sano uun kaddib markii uu feerka ka howlgabay sanaddii 1984-kii, kaasoo si uun loola xiriiriyey jugihii cuslaa ee madaxa kaga dhacayey muddadii uu ku jirey mihnadda feerka.
Haddaba, Maxamed Xaaji oo ah, tifaftiraha GoolFM.net ayaa idiin qaadaa dhigi doona barnaamij dhowr qaybood ahaa qaybtii 4-aad ee ugu dambaysey sooyaalka halyeeygaa Muslimka ahaa.
Halkan ka DHEGEYSO qaybtii 1-aad
Halkan ka DHEGEYSO qaybtii 2aad.
Halkan ka DHEGEYSO qaybtii 3-aad.
Koox cusub oo kula soo biirtay Barcelona tartanka saxiixa Nolito
Man United oo heshiis lagaartay Luis Nani si uu dib ugu soo laabto Old Trafford xaggaagan